नाथ रथ यात्राको झडप: सरकार ‘होलिवाइन नशा’ अझै उत्रिएको छैन् र ? – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ ब्लग / विचार ∕ नाथ रथ यात्राको झडप: सरकार ‘होलिवाइन नशा’ अझै उत्रिएको छैन् र ?
नाथ रथ यात्राको झडप: सरकार ‘होलिवाइन नशा’ अझै उत्रिएको छैन् र ?
सिन्धु खबर भदौ २०, २०७७ गते १७:३३ मा प्रकाशित
सिन्धुपाल्चोक । बिहिवार मत्स्येन्द्रनाथको रथ पुल्चोकबाट तानेर अलि पर स्तुपा र मिननाथको रथ पाटन टंगलबाट तानेर गाःबहाल ल्याइपु¥याए । रथ तान्ने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच दुई पटक झडप भयो । जसले सुरक्षाकर्मी र स्थानीय घाइते समेत भए, यसले नेपालसहित विश्वभर विरुप सन्देश पुग्यो । सामाजिक संञ्जालका भित्ता यही विषयका पक्षविपक्षको आलोचना र समालोचनाले भरिए । विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको लकडाउनमाथि बाढी पहिरोले मर्माहित देशबासीलाई थप यो दुखद खबरले खिन्न तुल्याएको छ । राष्ट्रपति उपस्थित भएर सम्पन्न गरिने महत्वपूर्ण परम्परा मत्स्येन्द्रनाथ रथ यात्राको बारेमा सरकारको वेवास्ताप्रति स्थानीय आक्रोशित थिए । दर्जनौ पटक ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुठी संस्थानलगायत निकायमा रथ तान्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
तर स्थानीय प्रशासन र संस्थानले जात्रा नै गर्न नपाइने भन्दै शासकिय प्रवृत्ती देखाएपछि स्तब्ध बने । फलस्वरुप सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेपपछि यस्तो दुर्दशा घट्यो, सरकार र जनप्रतिनिधि पूर्विय दर्शन र महत्वपूर्ण परम्पराबारे अनविज्ञ र गैरजिम्मेवार भएको यो एउटा बलियो उदाहरण हो यो । समयमै सरकारले यस विषयलाई निश्चित निचोड दिएर जात्रा सम्पन्न गराउने लक्ष्य बोकेको भए न संक्रमण फैलिन्थ्यो न त घटना नै हुन्थ्यो ।
नेपालको संविधानले अमुक धर्मप्रचार धर्मप्रवद्र्धन निषेध गर्दागर्दै संविधान नै चुर्लुम्म डुब्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ‘होलिवाइन प्रकरण’मा फसेको अर्को उदाहरण यहाँ प्रसंगिक हुनेछ । गत निर्वाचनमा ‘सूर्य छाप’ लिएर वाम गठबन्धनमा हातेमालो गरेका एकनाथ ढकालको ‘क्रिश्चियानिटी प्रवद्र्धधन’ गर्ने कार्यक्रमको सहआयोजक सरकार पनि थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी बौद्धिक समुहले व्यापक विरोध गरेपछि सरकार सहआयोजकबाट हटेर चोखिन खोज्यो । तर, मञ्चमा खुलेर देखियो । युपीएफ (युनिभर्सल पिस फेडेरेशन)लाई आयोजक राखेर गरिएको मिसिनरी कार्यक्रममा सरकारले घुडा टेकेर पत्र काटेर विभिन्न देशका सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण ग¥यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत उपस्थित हुन उर्दी नै जारी गरिएको सत्तारुढ दलका नेता भिम रावल अझै बताउँछन् । अझ आयोजक संस्थाको होली वाइन(पवित्र रक्सी)द्वारा सेचित भएपछि सरकारको आलोचन हुन कतै बाँकी रहेन । आयोजक संस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘होलि वाइन’ सेचित भएबापत सुशासन पुरस्कारबाट समेत विभूषित गर्न भ्यायो, सरकार मख्ख देखियो । अहिले पनि इसाइ ‘होलिवाइन’को नशामा सरकारले सनातन पुस्तौदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृति निमिट्यान्न बनाउन लागिपरेको आरोप खेपिरहनुपरेको छ ।
के सरकारलाई होलिवाइनको नशा अझै नउत्रिएकै हो र ? स्थानीय अझै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
के छ परम्परा ?
काठमाण्डौ उपत्यकामा मनाइने एउटा प्रमुख पर्व मत्स्येन्द्रनाथ वा मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्रा पनि एक हो । मत्स्येन्द्रनाथ रातो र सेतो गरी दुई वर्णका छन् । रातो वर्णका मत्स्येन्द्रनाथ बुङ्गमती,ललितपुर मत्स्येन्द्रनाथ र चोभारका मच्छिन्द्रनाथ आदिनाथ लोकेश्वर र सेतो वर्णका मच्छिन्द्रनाथमा काठमाण्डौको मच्छिन्द्रनाथ (जमलेश्वर, लोकेश्वर) र नालाका मच्छिन्द्रनाथ (पद्मपाणी लोकेश्वर )प्रसिद्ध छन् । यी दुवै रुपको जात्रा पर्व सम्पन्न हुने गर्छ ,तैपनि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा भने विशेष रौनककासाथ सम्पन्न हुन्छ । यो रथयात्रा प्रत्येक वर्ष बैशाखशुक्ल प्रतिपदाको दिन शुभारम्भ भई एक महिना, दुई महिना र कहिलेकाही तीन महिनासम्म लम्बिरहन सक्छ र भोटो जात्राकासाथ टुगिंन्छ ।
परम्पराअनुसार मस्त्येन्द्रनाथ ६-६ महिना बुङ्मती र पाटनमा राख्ने चलन छ । मत्स्येन्द्रनाथ सूर्य दक्षिणमय हुदा बुङ्मती र उत्तरायण हुदा पाटन मस्त्येन्द्रबहालस्थित मन्दिरमा बसालिन्छ । यो भारत असमको कामरुपकामक्षा पर्वतबाट मत्स्येन्द्रनाथ नेपाल ल्याउन भुमिका निभाएका तत्कालिन राजा नरेन्द्रदेव मल्ल, कान्तिपुरका तान्त्रिक बन्धुदत्त आचाजुको पालादेखि चल्दै आएको परम्परा हो । सौर्यमा तिथीअनुसार श्रावण कृष्ण एकादशी (साउन १) बाट सूर्य दक्षिणायण भएको थियो । यो पुस मसान्तसम्म अर्थात ६ महिना चल्छ । परम्पराअनुरुप मुख्य गरी पाटनबासी मिलेर रथ तान्ने गरिएको छ । ज्योतिषिको सुझावअनुरुप साझ तानिने रथ बिहान ६ बजेदेखि तान्ने र पहिलो दिन सुनधारा, दोस्रो दिन लगनखेल, तेस्रोदिन लगनखेल,थति टोल, चारदोबाटो र अन्तिम दिन साइत जुराएर जावालखेल तान्ने उल्लेख छ । पुल्चोकबाट रथ तानेर गाः बहाल,मंगलबजार, सुनधारा, ओकुबहालमा एक ÷एक दिन रथ रोक्नुपर्ने चलन छ । सुझावमा नलिवल र भोटा जात्रा नर्गने ,गाःबहालमा गुरुपूजा, मंगलबजारमा पाटन दरबारबाट दिइने पूजा, सुन्धारामा होम, लगनखेलमा महाबली पूजा गरिन्छ ।
मत्स्येन्द्रनाथ ,गोरखनाथ र नेपाल
‘कारणवश पहिले भगवान् शिवगोरक्षले छ्यानब्बे कोटी मेघमाला (सर्प)को आसन बाधेर बस्दा खडेरी परेपछि राजाले सिंहलद्धिपबाट योगिराज मच्छिन्द्रनाथलाई ल्याएपछि श्री शिव गोरक्षनाथ आसन बाधेर बसेको ठाउमा ल्याउदा पनि श्री शिव गोरक्षले मेघहरु जालन् भनेर आसन नउठी बाया घुडा मात्रै अलिकति उठाएर केही झुकेर प्रणाम गर्दा मात्रै पनि मेघमाला निस्क्यो । ’(श्री नाथतीर्थावलीबाट )
योगिराज मत्स्येन्द्रनाथलाई नेपालसँग प्रष्ट बुझाउन धेरै किस्सा जोडिरहन नर्पला । यहाँ प्राचिन ग्रन्थ श्री नाथतीर्थावलीको यो श्लोका अभिव्यक्तिले हरेकलाई एकदमै प्रष्ट पारिदिन्छ । तत्कालिन नेपालका राजा र शासकको घमण्ड तोड्न गोरक्षनाथ वा गोरखनाथले सम्पूर्ण सर्पलाई बाधेर १२ वर्ष आसन बसे । सर्प नभएपछि सबैतिर वर्षात भएन्, पानीको स्रोत सबै सुकेपछि हाहाकार मच्चियो । राजाहरु रुदैकराउँदै गोरखलाई आएर गुहारे, सेखी झरेपनि महायोगी गोरख शायद केही सन्देश दिन चाहान्थ्ये , उनी चुपचाप छ्यानब्बे कोटी सर्पमाथि आसन कसेर बसिरहे ।
कुनै उपाय नदेखेपछि तत्कालिन राजा नरेन्द्रदेव मल्ल, कान्तिपुरका तान्त्रिक बन्धुदत्त आचाजुसहित देशभरका राजा गोरखलाई आसनबाट उठाउन योगिराज मत्स्येन्द्रनाथलाई ल्याउन कामरुप कामक्षा प्रस्थान गरे । गोरखनाथका गुरु योगिराज मत्स्येन्द्रनाथलाई कहालिँदै गुहारे । योगिराज मत्स्येन्द्रनाथलाई समस्या जाहेर गरी नेपाल आउन राजी बनाए । धेरै अनुरोध गरेपछि मत्स्येन्द्रनाथ पनि आफु भमराको रुपमा नेपाल आउने वाचाअनुसार नेपाल आउनुभयो । आफ्नो गुरुको आगमन भएपछि गुरु गोरखनाथ सम्मानको लागि उठे । त्यतिखेर गोरखले केही झुक्दा मात्रै सर्प फुत्किएर भागे र वर्षात भयो । त्यसैको सम्झनामा यो जात्रा मनाइदैं आएको छ ।
मत्स्येन्द्रनाथ : नाथ सम्प्राद्धय
योगिराज मस्त्येन्द्रनाथलाई जान्नुअघि नाथ शब्दको शाब्दिक विश्लेषण जान्न आवश्यक छ । नाथ शब्दको शाब्दिक विश्लेषण यस्तो छ ना (आनादि रुप), थ(भुवनत्रयमा स्थापीत हुनु) ,यसरी अनादिरुपबाट स्थापित धर्म जसको कारणले भुवनत्रयको स्थितीको कारण निर्मित भएको छ, त्यही नै नाथ हो भनिएको छ । नाथको परिभाषालाई लेखकहरुले कान चिरी कुण्डल लगाएका व्यक्ति नाथ हुन्छन् भनेर उल्लेख गरेका छन् । नाथ सम्प्राद्धयको विकाससँगै नाथयोगीहरुमा जुन किसिमको नीति नियम र अनुशासन हुनुपथ्र्यो, त्यो अभावमा आजसम्म आइपुग्दा केवल नाथ भनेको कान छेडेर कुण्डल लगाएका व्यक्ति हुन भन्ने संकुचित परिभाषा सर्वमान्य हुनपुगेको छ । नाथ परम्परामा नवनाथ र चौरासिनाथको सूची जताततै प्रसिद्ध पाइन्छ । जसमा नवनाथ सम्प्राद्धयमा आदिनाथका शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ र उनका शिष्य गोरखनाथ थिए,जसबाट नवनाथको विकासक्रम सुरु भयो । भने साक्यविहारको सूचीमा चौरासीनाथको नाम उल्लेख छ ।
मत्स्येन्द्रनाथको उत्पत्तीबारे ग्रन्थपिच्छैका अनेक मिथक प्रचलित छन्,यसबारे वर्णन गरेर साध्य पनि छैन् । तर भनिन्छ,योगिराज मत्स्येन्द्रनाथ र गोरखनाथ आदियोगी भगवान शिव नै हुन् । यति मात्रै हो की मत्स्येन्द्रनाथ र गोरखनाथ केही समय पछि आए, भगवान शिव आदिपुरुष थिए । पूर्विय सन्त पंरम्परामा जति योगदान मत्स्येन्द्रनाथ र गोरखनाथको छ ,शायद यत्तिको कसैको पनि छैन् । पूर्विय वेद,पुराण र उपनिषिदमा मात्रै होइन् , कबिर, जैन, बौद्ध अन्य धर्ममासमेत नाथ परम्परालाई मानिएको उल्लेख पाइन्छ । विश्व क्रान्तिपुरुष बुद्ध ओशो रजनिशले आफ्नो प्रवचन र लेखमा गोरखलाई पूर्विय धर्मआकाशका चार महातारा पतन्जली, कृष्ण, बुद्धमा गनेका छन् । भारतिय प्रसिद्ध धर्मगुरु साधुगुरु आफ्नो प्रवचनमा योगिराज मत्स्येन्द्रनाथ र गोरखले दिएको योगदानबारे भनेर कहिल्यै थाक्दैनन् ।
योगिराज मत्स्येन्द्रनाथ र महायोगी गोरखनाथबाट विश्वभमा नयाँ धर्म ,नयाँ क्रान्तीको प्रार्दुभाव भयो । पाण्डित्यको कब्जामा परेको हिन्दु परम्परामा दुई संतले परमबोध र शिवत्वको उपलब्धीको क्रान्ति भरिदिए । जसबाट अनेकौ सन्त बुद्धपुरुष बने, कति औ मुक्त भए । मस्त्येन्द्रनाथका शिष्य गोरख जसले परमात्मासम्म पुग्ने यति धेरै माध्यम खोजेर दिए । यति धेरै दर्शन ध्यानविधि दिए, मान्छे झुक्किए अनि एउटा उखानै बन्यो की ‘गोरख धन्धा’ । गोरखले परमात्मासम्म पुग्ने हठयोग, तन्त्रमन्त्र योग,साधनादेखि अनेक मार्ग दिए , जुन देखेर मान्छे भ्रमित बनेर उखान बनाइदिए । मत्स्येन्द्रनाथ र गोरखबारे श्रीमदभागवत गिता, मार्कण्डेय पुराण्देखि अनेकमा उल्लेख छ , जसमध्ये नारदपुराणमा यसरी वर्णन गरिएको छ ,
तं कल्पयामस सुतं शुभाङ्गे
सोत्सङ्ग आस्थाप्य चुुचुम्ब बक्त्रम्
सुतो ममायं किल मत्स्यनाथो
विज्ञाततत्वो खिलसिद्धनाथ: ।। (नारद पुराण उत्तर ६९÷२३)
अर्थात क्षीर समुन्द्रको तटमा आदियोगी शिवले पार्वतीलाई परमबोधबारे उपदेश दिनुभयो । जुन क्षीर समुन्द्रको लहरमा कुनै माछाको पेटमा प¥यो । त्यही माछाबाट जन्मिएका मत्स्येन्द्रनाथले गोरखलाई त्यही बोध उपदेश दिनुभयो ।
मत्स्येन्द्रनाथका शिष्य गोरखबारे एउटा गहन वचन छ ।
‘ध्यानी नहि शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख ’ अर्थात् न यहा शिवजस्ता ज्ञानी कोही छन् , न त गोरखजस्ता ज्ञानी कोही छन् । आदियोगी शिव र गोरखको प्रतिमा जहातही पुजिएको देख्छु शिवलिंग पुजाको कुरा होइन् ,परमशुन्य शिवत्वको कुरा हो । हाम्रो आत्माको पुञ्जको प्रतिक हो शिवलिंग । (श्री लालनाथ वचन )
हिन्दु र बौद्ध परम्परामा पुजिएका मत्स्येन्द्रनाथ योग वंशावली जातकअनुसार अनिष्ट नक्षत्रमा जन्मिएका हुनाले सागरमा फालिएकाले माछाको पेटमा पुगेका हुन् । मुलनाथ शिवले यिनलाई उद्धार गरी अमरत्व दिए । त्यसैले यीनी मत्स्येन्द्रनाथ कहलाए र लघुदेवमा चिनिए । नाथ परम्परामा कौल वा कुलतन्त्रको प्रार्दुभाव कामरुप कामक्षाबाट सुरु गरे । त्यहाबाट यो मुलतः दक्षिण एसियामा प्रचार भयो ।
मत्स्येन्द्रनाथबाट कौलतन्त्रसमबन्धी अकुलवीर तन्त्र, कुलानन्द तन्त्र,कौलज्ञाननिर्णय, कामख्यागुह्यसिद्धीजस्ता अनेक ग्रन्थ लेखिएका छन् । नाथ सम्प्राद्धयमा आदिनाथ मत्स्येन्द्रनाथ दक्षिण एसियामा नवौ शब्तादी अघि उदय भइसकेको मानिन्छ ।
नाथको सन्देश : हास नाच गाउ रमाउ अनि ध्यान गर ,
सम्पूर्ण संतपरम्परामा नाथ सम्प्राद्धयले दिएको सन्देश योगिराज मत्स्येन्द्रनाथका शिष्य गोरखले एकै शब्दमा दिएका छन् । हुन त मुक्तिको मार्गको लागि नाथ परम्पराले दिएको योगदान शब्दमा वर्णन गर्न शायद सकिदैन् । आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ र गोरख मुल हुन् । गोरख संहितामा गोरखको अदभूत उपदेश यस्तो छ,
हसिबा खिलिबा धरिबा ध्यानम्
अहनिसी कथिवा ब्रह्म गियांन ।।
हसै खेलै करे मन भंग
ते निहचल सदा नाथके संग ।। (गोरख संहिता )
अर्थात् हास खेल ,रमाउ नाच अनि ध्यानमा डुब । निर्विचार भएर ब्रम्हममा तन मन लगाउ । मनलाई तोड्नुनै नाथको सतसंग हो । शुन्यमा डुब ।